China ACCURL ထုတ်လုပ်သူ 1000w IPG Fiber CNC လေဆာဖြတ်စက်ကိုရောင်းသူထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ | accuratel
ACCURL ထုတ်လုပ်သူ 1000w IPG Fiber CNC လေဆာဖြတ်စက်ကိုရောင်းရန်
ACCURL® ၎င်းတို့၏ Masterline 4Kw IPG 6Kw 10Kw 12Kw 15Kw 20Kw Fiber လေဆာဖြတ်စက်ကိုအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူကမ္ဘာ့အဆင့်မီအစိတ်အပိုင်းများ မှလွဲ၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစျေးနှုန်းဖြင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန်တပ်ဆင်ပါ။
• လေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်တောက်သောခေါင်း:Raytools လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းခေါင်းကို; ခေါင်းစဉ်ဖြတ်တောက်ခြင်း Precitec
• စီအင်စီထိန်းချုပ်မှု:CypCut Fscut 2000 CNC စနစ်၊ Beckhoff TwinCAT CNC ထိန်းချုပ်မှု၊ HypPanel Touch FSCUT8000 TwinCAT CNC စနစ်
• ဖြတ်တောက်ခြင်း:ရိယာ: 3000x1500mm, 4000 × 20000mm, 6000x2000mm, 6000x2500mm
• ဖြတ်တောက်နှုန်း: မက်စ် ၁၅၀ မီတာ / မိနစ်
• တည်နေရာ: 180m / min
• အရှိန်များ 3G
BECKHOFF ®မြင့်မားသော EtherCAT servo drive
PRECITEC ®ခေါင်းဖြတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း 2.0
ACCURL®အမြန်ဖောက်ခြင်း 2.0: Ultrafast ဖောက်ခြင်း
Automatic Shuttle table 4020 (Servo Motors ဖြင့်အပေါ်နှင့်အောက်)
2.0 သန့်ရှင်းရေးအလိုအလျောက် nozzle
ဂရပ်ဖစ် Anti-burn နည်းပညာ။
မီးခိုးထုတ်ယူမှုစနစ် (TODC-6L / 6000m³ / h) ။
IPG 6kw 8Kw 10Kw 12Kw 15Kw 20Kw ဖိုင်ဘာလေဆာပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု YLS-Series CUT
ACCURL ® Laser Vision Detection 2.1 (လေဆာရောင်ခြည်အပိုင်းအစ၏တိုင်းတာမှု)
Class IV ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ်နှင့် CE အမှတ်အသားများ
BECKHOFF ® Embeded PC များ - တိုက်ရိုက်ပေါင်းစည်းထားသည့် I / O အဆင့်ရှိသောစက်မှုလုပ်ငန်း PC များ
TwinCAT Analytics နှင့် TwinCAT IoT နှင့်အတူစာရွက်သတ္တုနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်း 4.0
•တိကျမှန်ကန်သောသံမဏိဘောင်များကိုလောင်ကျွမ်းစေသည် စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေရန်600⁰ကျော်မှာ။ ၎င်းတို့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအထိပုံပျက်စရာမလိုဘဲတည်ဆောက်ထားသည်။
•အလိုအလျောက်လဲလှယ်ပေးသော pallet system သည်အလေးချိန် ၂၅၀၀ ကီလိုဂရမ်ကျော်ရှိသည်။
•ဇုန် (၈) ဇုန်နှင့်မီးခိုးမြူစနစ်
• Dual synchronized အမွှာ servo မော်တာ drive ကိုစနစ်
• Helical ထိန်သိမ်းခြင်းနှင့် slant pinion drive စနစ်သည်အလွန်ချောမွေ့သောလှုပ်ရှားမှုများကိုဖြစ်စေသည်။
လူမီနီယမ် Gantry သွန်းလေ၏
• ACCURL ၏အဆင့်မြင့်နည်းပညာအလူမီနီယမ် crossbeam ကိုအထူးထုတ်လုပ်ထားသော ၁၀ တန်သံမဏိမှိုဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
•၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောသံတံခါးပေါက်များ၏အလေးချိန်၏ ၅၀% တွင်ပိုမိုတင်းကျပ်မှုရှိစေပြီးလျော့နည်းသွားသော inertia ဖြင့်အရှိန်မြင့်စေသည်။ ဤသည်အပေါ်လျော့နည်း wear နှင့်မျက်ရည်ဖန်တီးပေးပါတယ်။
ဂရပ်ဖစ် Anti-burn နည်းပညာ
•လေဆာရောင်ခြည်ဖြင့်ရိုက်နိုင်သောစက်ကိရိယာတစ်ခုလုံးရှိTheရိယာကို ၂၀ မီလီမီတာဖိုက်အထူဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။
•ခေါင်းကိုဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အညီထိန်းချုပ်ထားသောရှပ်တာများမှတဆင့်ထိရောက်သောအငွေ့ထုတ်ယူခြင်းသည်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကိုပိုမိုထိရောက်စွာအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ပိုမိုနည်းသောကုန်ကျစရိတ်နည်းစနစ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤစနစ်တွင်အငွေ့ထုတ်ယူသောဇုန် (၆) ခုပါဝင်သည်။ တိုးတက်လာသောစုတ်ယူခြင်းစီးဆင်းမှုဒီဇိုင်းသည်ရလဒ်များကိုရရှိသည်။
• Masterline တွင် Beckhoff မှ servo motor နှင့် drives များကိုဒီဇိုင်းဆွဲထားသောဂျာမနီဒီဇိုင်းများတပ်ဆင်ထားသည်
မြန်နှုန်းမြင့် EtherCAT ဆက်သွယ်ရေး
• Brushless သုံးဆင့်မော်တာ
အလိုအလျောက် Nozzle Changer
Beckhoff Twincat စီနိုထိန်းချုပ်မှုစနစ်
• ACCURL Masterline Fiber Laser ကို Beckhoff CNC control unit ဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်
• EtherCAT နှင့် eXtreme Fast Control (XFC) နည်းပညာသည်မြန်ဆန်စွာမြန်သောနှုန်းဖြင့်မြန်သော switching လုပ်နိုင်သည်။
Beckhoff CNC Controller များကိုလေဆာဖြတ်စက်တွင်အသုံးပြုသည်။ နှင့် TwinCAT NC I / CNC အလိုအလျောက် software ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် သပ္ပါယ်အပါအဝင်လျှောက်လွှာ - တိကျတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကိုများအတွက်သင့်လျော် ဂျက်ထိန်းချုပ်မှု, ပြောင်းပြန်ခရီးသွားသို့မဟုတ်လမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်စတင်။
Multitouch touch screen ပါဝင်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကွန်ပျူတာ ၁၉ "
• TwinCAT - အင်ဂျင်နီယာနှင့် runtime အတွက် software
•မြင့်မားစွာပြောင်းလဲနေသော servo drive နည်းပညာ
• Beckhoff ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဝဲလ်ပလက်ဖောင်း
• parameters တွေကိုအလိုအလျှောက်လိုက်လျောညီထွေ
• Adjustable အမှားတုံ့ပြန်မှု
• EtherCAT I / Os: IP 20 နှင့် IP 67 ရှိကျယ်ပြန့်သော I / O ရောင်စဉ်များနှင့်အကာအကွယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
•စက်မှုလုပ်ငန်း ၄.၀ TwinCAT Analytics နှင့် TwinCAT IoT နှင့်အတူစာရွက်နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း
Beckhoff Drive Technology သည်ကုမ္ပဏီ၏ TwinCAT အလိုအလျောက်ဆော့ဝဲလ်မှပေးသောရွေ့လျားမှုထိန်းချုပ်ရေးဖြေရှင်းချက်များနှင့်ပေါင်းစပ်။ အဆင့်မြင့်ပြီးအားလုံးပါဝင်နိုင်သော drive စနစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
Cad / cam Software ကို Nesting ။ ခလုတ်
Libellula.CUT သည် Libellula Universe ၏ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာဖြစ်သည် Libellula ၏နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု။
•၎င်း၏ CAD နှင့်သီးသန့် One-Click နည်းပညာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Libellula.CUT သည်ဂျီ ometric မေတြီအသေးစိတ်ကိုခဏအတွင်းဖန်တီးသည်သို့မဟုတ်တင်သွင်းသည် မည်သည့်အခြားပုံဆွဲရေးဆွဲခြင်းကိုမဆို၊ ပရိုဖိုင်းများကိုအလိုအလျောက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့် နောက်ဆက်တွဲအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အကောင်းဆုံးထုံးစံ၌သူတို့ကိုစီစဉ်။
+ အလိုအလျောက် + ပေါင်းစည်းမှု + ထိရောက်မှု + ကုန်ထုတ်စွမ်းအား
- အချိန်သင်ယူခြင်းနှင့်ပရိုဂရမ်းမင်းကိုသင်ယူခြင်း = Libellula.CUT
စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အသိဉာဏ်ရှိသောအသုံးချမှုအတွက် Libellula ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသုတေသန၏အကောင်းဆုံး။
Libellula.CUT တွင် software အင်ဂျင်နီယာများနှင့်လေ့လာသုံးသပ်သူများကအာရုံစူးစိုက်ကြသည်
စာရွက်ဖြတ်ခြင်း၏အဓိကအကြောင်းအရာ Libellula နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု
•ပရိုဂရမ်နှင့်ငွေကိုအဆင့်တိုင်း၌အလိုအလျောက်အပြည့်အ ၀ ရနိုင်သည်
TIME နှင့် MONEY တွင်မြင့်မားသောကယ်တင်ခြင်း
• Pierce အရေအတွက်လျှော့ချခြင်း
• ISA စနစ်နှင့်အမြတ်အစွန်းနည်းသောအမြင့်ဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်မှုနှင့်အတူအသိုက်လုပ်ခြင်းကိုအကောင်းဆုံး
• MINIMUM SCRAP ဖြင့်မညီမညာဖြစ်နေသောအပိုင်းအစများပေါ်တွင်အသိုက်လုပ်ခြင်း၏အကောင်းဆုံးမျိုးဆက်
• FMS လိုင်းများနှင့် / သို့မဟုတ်လက်စွဲလုပ်ငန်းများအားစီမံခြင်း -
Precitec ဖြတ်တောက်ခြင်း Head Precitec Procutter 2.0
• ProCutter 2.0 မျိုးဆက်သစ်သည်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်းနှင့်အသစ်အားဖြင့်အထင်ကြီးစေသည် အလိုအလျောက် features တွေ။ ပိုမိုမြန်ဆန်၊ ပိုမိုထိရောက်၊ ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း - တိုးတက်မှုမြောက်မြားစွာရှိခြင်းကြောင့်မျိုးဆက်သစ်တွင်လေဆာဖြတ်ခြင်းသည်ပုံသဏ္isာန်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
• ProCutter 2.0 APP သည်လေဆာဖြတ်ခြင်း ဦး ခေါင်း၏အခြေအနေနှင့်မှားယွင်းသောမက်ဆေ့ခ်ျများ၏မေးမြန်းမှုကိုမြင်ယောင်စေသည်။
ဒါဟာဖြတ်ခြင်းနှင့်လျှော့ချခြင်းနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း ... ။
လွယ်ကူသော parameter သည်ရှာဖွေတွေ့ရှိ!
အရည်အသွေး↗လုပ်ငန်းစဉ် ၀ င်းဒိုး↗
လေဆာ -on အချိန်ပိုမို!
ရှေ့သို့ ထုတ်လုပ်သူစံ Waterjet ဖြတ်တောက်စက် ၅ Axis - ၃ လက်ကိုင်ရေစက် JC CNC ဖြတ်ခစက်စက်ပစ္စည်းခစျေးနှုန်း - accuratel
နောက်တစ်ခု: သံမဏိသတ္တု CNC ပန့်စာနယ်ဇင်းထုတ်လုပ်သူများအတွက် ACCURL စီဒီစီလည်ပတ်အမြင့်ဆုံး MAX-T-50 တန်
•အမြဲတမ်းအကာအကွယ်ပေးသည့် ၀ င်းဒိုးကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း
• PierceTec နှင့်အလိုအလျှောက်ဖောက်ခြင်း
• CoolTec နှင့်သတ္တုပြားကိုရေအေးစေသည်
•အကာအကွယ်ပြတင်းပေါက်များနှင့်လုံး ၀ ဖုန်မှုန့်ခံနိုင်သောရောင်ခြည်လမ်းကြောင်း
• LED operating status ကို display ကို
• WLAN မှတစ်ဆင့် APP သို့အာရုံခံအချက်အလက်များအားလုံးနှင့် APP သို့စက်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ • nozzle area (gas ဖြတ်တောက်ခြင်း) နှင့် head ထဲတွင်ဖိအားစောင့်ကြည့်ခြင်း
လေဆာစွမ်းအင် သံမဏိ သံမဏိ teel လူမီနီယမ် ကြေးဝါ ကြေးနီ
၆ ကီလိုဝပ် ၃၀mm * ၃၀mm * ၃၀mm * ၁၂ မီလီမီတာ 10mm
၈ kW ၄၀mm * ၄၀mm * ၃၅ မီလီမီတာ * ၁၆ မီလီမီတာ ၁၅ မီလီမီတာ
၁၀ kW 50mm * 50mm * ၄၀mm * ၂၀ မီလီမီတာ ၂၀ မီလီမီတာ
၁၂ ကီလိုဝပ် ၆၀mm * ၆၀mm * 50mm * ၃၀mm * ၂၅ မီလီမီတာ
၁၅ kW ၆၀mm * ၆၀mm * ၆၀mm * ၄၀mm * ၃၀mm *
* အများဆုံးအထူလျှော့ချရန်, အောက်ပါအခြေအနေများထွက်သယ်ဆောင်ရမယ်:
China Fiber လေဆာဖြတ်စက်
တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သည့် Metal Tube 2mm Fiber Laser ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်